Jereo ny tanàna tsara indrindra any atsimon'i Frantsa hitsidika | Bezzia
Vohitra any amin'ny faritra atsimon'i Frantsa izay tokony hotsidihinao
Susana Garcia | 02/06/2021 10:00 | Lifestyle, Tsangatsangana
La ny faritra atsimon'i Frantsa dia mora azo avy any Espana, indrindra raha mipetraka eo amin'ny faritra akaikin'ny sisin-tany ianao. Izay no antony maha-toerana notsidihin'ny Espaniola izay mitady hahita ny vazan'i Frantsa izay mbola tsy notetezin'izy ireo. Amin'ity faritra atsimo ity, toy ny any Frantsa rehetra, dia azo atao ny mahita vohitra manana hatsaran-tarehy tsy mampino izay azo tsidihina ao anatin'ny fotoana fohy.
Ankoatra ny tanàna, ny fitsidihana tanàna kely dia zavatra mahafinaritra, satria manana fifandraisana hafa izy ireo, mangina kokoa ary nentim-paharazana kokoa. Ao amin'ny ny olona any atsimon'i Frantsa dia hitantsika hoe manao ahoana ny fomban'izy ireo amin'ny tanàna izay mahazo ny fitaomany avy any Espana akaiky. Ho hitantsika ny sasany amin'ireo tena mahaliana.
1 Carcassonne, trano mimanda medieval
Carcassonne, trano mimanda medieval
Teo amin'ny toeran'ny trano mimanda dia efa nisy tanàna romana ary tamin'ny taonjato faha-XNUMX naorina ny trano mimanda voalohany. Ny Trencavels no nanangana ny trano mimanda lehibe ankehitriny, na dia namboarina imbetsaka aza izy io. Manodidina ny taonjato faha-XNUMX ny fananganana ny ny faritra ambany fantatra amin'ny anarana hoe Bastida de San Luis. Azonao atao ny miditra malalaka amin'ny vavahady Narbonne, akaikin'ny fiantsonan'ny fiara, hahitanao ireo rindrin'ny kilometatra. Ao anatiny misy tilikambo, varavarana fidirana maromaro, ny Castle Castle Carcassonne na ny Saint Nazaire Basilica.
Najac dia ao amin'ny departemantan'i Aveyron, eo anelanelan'ny havoana maintso ao anaty ala misy havoana. Tanàna be fahalianana ity izay misy fandaminana miolakolaka amin'ny tsipika mitarika ny havoana, izay misy ny trano mimanda. Plaça del Barry no kianja malalany ary liana te-hidina amin'ilay lalana tokana mankany amin'ny lapa izy. Avy amin'ny trano mimanda dia misy ihany koa fahitana lehibe momba ilay faritra.
Belcastel dia iray amin'ireo tanàna any Frantsa izay manome antsika tsara izay tadiavintsika. Manana tetezana vato tsara tarehy izy io tamin'ny taonjato faha-XNUMX, trano vato amin'ny tontolo voajanahary tsy mampino ary filaminana milamina. Izy koa dia manana trano mimanda taonjato faha-XNUMX. Azonao atao ny mitsidika ny ampahany amin'ity lapa ity, na dia manana tompona tsy miankina aza izy io. Ny tsara indrindra dia ny mandeha mamaky ny tanàna amin'ny fahatoniana mahita ny zorony. Misy toerana maromaro misy terraces haka aina amin'ny toerana toy izao.
Este tanàna dia eo amin'ny Camino de Santiago ary eo anelanelan'ny faritra maitso mavana no misy azy, ka tanàna iray misongadina amin'ny hatsarany sy ny tontolo iainany izy. Azonao atao ny miakatra amin'ny fomba fijery hijerena ny tanànan'i Conques ary mazava ho azy fa tsy maintsy mandeha mamaky ny arabeny ianao mba hahitanao ny firafitry ny ambanivohitra mahavariana amin'ireo tranony vato kely. Misongadina ny trano fonenany Romanesque lehibe miaraka amin'ny Portico of the Last Judgment.
Ity dia iray amin'ny an'ny tanànan'ny medieval tsara tarehy any amin'ny faritr'i Occitania. Ao amin'ny Camino Frances de Santiago no misy azy, ka toerana somary be olona io. Ao an-tanàna isika dia afaka mahita endrika maivana amin'ny hazavana ao amin'ireo trano taloha. Bastide izy io, tanàna iray mipaka hatrany amin'ny kianja lehibe iray. Hita izany avy amin'ny Plaça des Cornieres, izay manomboka ny arabe roa. Azonao atao koa ny mahita ny fiangonana tsara tarehy any San Bartolomé miaraka amina alitara baroque.
Ity tanàna tsy mampino ity dia ao amin'ny departemanta Dordogne, akaikin'ny tanànan'i Sarlat. Eo amoron'ny renirano Dordogne sy amin'ny harambato vato sasany izy io. Ny trano tsy mahita ny hantsana amin'ny fomba mahavariana ary mazava ho azy fa ny fomba tsara indrindra hahitana azy dia amin'ny alàlan'ny dia an-tsambo eny amoron'ny renirano. Ao an-tanàna dia azonao atao ihany koa ny mahita ny Marqueyssac Gardens, zaridaina tsara tarehy sy voahaja tsara. Toy ny any amin'ny tanàna maro dia manana trano mimanda koa ity iray ity, dia ny an'ny Castelnaud la Chapelle
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Lifestyle » Vohitra any amin'ny faritra atsimon'i Frantsa izay tokony hotsidihinao
Ny hevitra manicure izay hamafana amin'ity fahavaratra 2021 ity
Ahoana no ahafahan'ny lehilahy manintona vehivavy